Su’aalo waa in la Iska Weeydiiyaa? | allsanaag
Su’aalo waa in la Iska Weeydiiyaa?
1st October 2020 admin Category :
Warbixin shalay webka Allsanaag lagu daabacay oo ka hadleeysay shirkad shidaalka ka ganacsata laguna magacaabo Trafigura ayaa hurdada ka toosisay shacabka Soomaaliyeed. Shirkadan oo heshiis ay la soo galeen siyaasiyiinta maamulka Hargeeysa ayaa cidna war u heeyn waxa heshiiskaas uu ku qotomo.
Hadaba, qaar ka mid ah xisbiyada Hargeeysa ayaa markii ay warbixintaas aqristeen, waxeey is weeydiiyeen su’aalo ku saabsan shirkadan Trifagura oo ah mid musuqmaasuq badan, suntana ku aasta meeshii ay fursad ka hesho.
Hase ahaatee, arrintan ayeey tahay in ay dawladda federaalka ka hadasho si shirkadan dalka Soomaaliya looga mamnuuco.
← Halaga Saaro Shirkadan Dalka TACSI: KHADRO MAXAMED BOOS →